Ubuncwane obufihliweyo-I-Suite yeeNdwendwe zaBucala
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguDon
Libala amaxhala akho kule ndawo iphangaleleyo nepholileyo.
Indawo yethu yeendwendwe ikwindawo esezantsi ngasemva kwikhaya lethu. Indawo efihlakeleyo yangaphandle izolile kwindawo entle. Kukho indawo yokungena yabucala kwindawo yokuhlala ebanzi nevulekileyo enendawo yomlilo yegesi. Kukho iTV enkulu eneCable, iNetflix kunye neWiFi ebalaseleyo. Siye sabamba abahlobo kunye neendwendwe apha iminyaka. Sigqibe ekubeni songeze ikhitshi eligcweleyo kunye negumbi lokuhlambela impahla ukuze sivuleleke kuluntu lwakwa-Airbnb.
Sihlala kwindawo entle, ezolileyo. Indlela yindlela enye yamakhaya alungileyo. Ngenxa yokuba ulwahlulo lwakhiwe phezu kwenduli kukho indawo ephezulu kunye nesezantsi yelophu. Nceda uqaphele iimpawu zendlela enye kunye neempawu zokungapakishi kuba unokupaka kuphela kwicala elinye lesitrato. Ikhaya lethu linendawo yokupaka ii-RV esiza kuyishiya ivuliwe ukuze simise ukupaka ngaphandle kwesitalato.